Venezoela: Antonio Lauro Sy Ny Feon-gitarany Klasika · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 22 Aogositra 2017 17:29 GMT
Vakio amin'ny teny বাংলা, Português, Français, Italiano, Español, 繁體中文, 简体中文, English
(Marihina fa tamin'ny 24 Aogositra 2008 no nanoratana ny lahatsoratra teny anglisy)
Noheverina ho anisan'ny endrika maneho indrindra ny kolontsaina ao anatin'ny maha-izy azy i Antonio Lauro tamin'ny andro faha-91 taona nahaterahany. Mpamoron-kira tena manan-talenta teraka tao Ciudad Bolívar , Venezoelà i Lauro ary namorona feonkira waltz sy feonkira gitara maro hafa ihany koa izy. Matetika ireo feonkira ireo no lalaovin'ny mpitendry gitara malaza ao amin'ny firenena sy iraisampirenena. Ary amin'ny maha ao anatin'ny tarika Trio Cantores del Trópico azy dia niezaka ihany koa i Lauro nandray anjara tamin'ny famadihana ireo vakoka mozika eoropeana ho melodia tena mitovy amin'ireo mozika mampiavaka ny Venezoeliana . Nitsidika ireo firenena manodidina izy mba hampiely ny feon'ny mozika Venezoeliana.
Nahatsiaro an'i Lauro ny bilaogera Venezoeliana sasany toa an'i Rosa avy ao amin'ny Las Cosas de Rosa [es] ary namoaka lahatsoratra mahaliana momba ilay mpiangaly mozika (miaraka amin'ny rakitra mozika, rohy sy sary) ary nanamarika hoe:
Heverina ho iray amin'ireo mpiangaly mozika matihanina Amerikana Latinina malaza indrindra miaraka amin'ny gitara i Antonio Lauro ary nandray anjara tamin'ny fanamafisana ny fandraketana manerana izao tontolo izao ity zavamaneno ity ihany koa izy.
Nanoratra tao amin'ny bilaoginy Literanova [es] i Eduardo Casanova:
Mpampianatra mozika ahy izy tany an-tsekoly, izay namoronany ny amboarampeo kely, toy ny nataony tany amin'ny sekoly maro, ary nahatonga azy ho tena mpamorona ny hetsika amboarampeo tena nahomby tao Venezoela. Nirehareha fatratra aho afaka mihaino ny sanganasany tao amin'ny onjampeo Eoropeana. Profesora Lauro no mpamoron-kira fanta-daza indrindra avy ao Venezoela, sy ao Amerika Latina ihany koa aza.
Iray amin'ireo feonkira “mozika klasika” Venezoeliana maoderina fanta-daza indrindra ny “Natalia”. Nanoratra izany ho an'ny zanany vavitokana i Lauro ary tsy fanta-daza noho ny hatsarany fotsiny izany ankehitriny, fa sady tena sarotra ho an'ireo gitarista ihany koa ny mitendry izany feonkira izany (araka ny hita ao anatin'ny fanehoan-kevitra amin'ny lahatsary etsy ambany):
Namoaka lahatsary mahaliana iray i Tan Toche izay ahitana ireo mpanakanto malaza manandrana mitendry ny “Natalia”.
Ato amin'ity lahatsary ity, milalao hira mandrotsirotsy izay noforoniny ho an'ny zafikeliny María Cristina ilay mpamoron-kira miaraka amin'ny gitara izay namboarina ho azy manokana.